छोराको ब्रेक असफल भएपछि सलमानसँग सहयोग माग्दै अनिल - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२७ कार्तिक,२०७३ | Agency
बलिउड अभिनेता अनिल कपूरका छोरा हर्षवद्र्धनको बलिउड ब्रेक असफल भयो । हर्षले ऐतिहासिक सिनेमा मिर्जियाबाट बलिउडमा ब्रेक लिएका थिए । छोराको बलिउड ब्रेक असफल भएपछि तनावमा रहेका अनिल सलमानको सहयोगको अपेक्षामा छन् । उनी आफ्नो छोरालाई अब सलमानले गाईड गरुन् भन्ने चाहन्छन् ।
अनिलले सलमानलाई छोरा हर्षबद्र्धनको करिअरमा सहि बाटो देखाउन आग्रह गरेका छन् । भारतको एक अनलाईन पोर्टलमा छापिएको खबरका अनुसार छोराले कुनै ठूलो बजेटको रोमान्टिक कमेडि फिल्मबाट बलिउडमा बे्रक लेओस् भन्ने चाहना अनिलको थियो । तर हर्षले करिअरको पहिलो फिल्म स्वरुप मिर्जियालाई छनौट गरे । जुन पूर्ण रुपमा असफल रह्यो ।
अनलाईनहरुमा प्रकाशित खबरका अनुसार अनिलका छोरा हर्ष आफूलाई जे मन लाग्यो त्यहि मात्र गर्छन् । उनी अरुको अर्डर अनुसार हिड्न जानेका छैनन् । यहि कारण पनि अनिल सलमानले छोराको करिअरमा गाईड गरुन् भन्ने चाहेका हुन् ।
हाल हर्ष फिल्म भावेश जोशीमा व्यस्त छन् । यो फिल्म पछि उनले श्री राम राघवनको एउटा सिनेमामा काम गनसम्भावना छ ।
अनिल कपूरले छोरासँग स्क्रिन सेयर गर्ने,सलमानको सुरक्षामा प्रशंसक-बलिउड अपडेट
अनिल कपूर छोरा हर्षवर्दन कपूरसँग छिट्टै नै पर्दामा देखिने भएका छन् । उनीहरु सिनेमामा पनि बाउ छोरको भूमिकामा हुनेछन् । सा्रेतका अनुसार क..
जब अनिल कपूर अचानक फ्यानको घर पुगे, त्यसपछि के भयो ?
अनिल कपूरका छोराको शरीरमा दिदीहरुको ट्याटु भन्छन्–गर्लफ्रेण्डको ट्याटु खोपेर काम छैन
श्री देवी किन राख्दैछिन् छोरीलाई मिडियाबाट टाढा ?
मिर्जियाको लागि निकै उत्साहित अनिल कपूरका छोरा हर्षवर्धन
टिभिमा फ्ल्प भए अनिल, झलकमा चलेन ज्याक्लिनको जादु